Odayaasha dhaqanka magaalada Garoowe oo xarunta madaxtooyada kula kulmay Madaxweyne Cabdiweli - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandOdayaasha dhaqanka magaalada Garoowe oo xarunta madaxtooyada kula kulmay Madaxweyne Cabdiweli
March 27, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Odayaasha dhaqanka magaalada Garoowe oo xarunta madaxtooyada kula kulmay Madaxweyne Cabdiweli. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta mdaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Odayaasha dhaqanka magaalada Garoowe ayaa xalay oo Axad ahayd fiidkii Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali kula kulmay madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
Kulanka ayaa waxaa looga wadahadlay arrimo kala duwan oo ay kamidyihiin ammaanka iyo horumarka caasimada, sida mid kamid ah odayaasha dhaqanka uu khadka taleefoonka ugu sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Maxamed Cali oo katirsan odayaasha dhaqanka Garoowe ayaa Puntland Mirror u sheegay kulanka Madaxweyne Cabdiweli kadib, kaasoo socday muddo labo saac, in odayaasha iyo madaxweynuhu ay isku-raaceen si wadajir ah in loola dagaalamo falalka amni darada ee magaalada, taasoo xarun u ah haayadaha dowladda.
Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay Wasiirka Caafimaadka Cabdinaasir Cusmaan Ciise iyo Wasiirka Amniga Cabdi Xirs Cali.
Kani waxa uu ahaa kulankii kowaad oo u dhaxeeya labada dhinac tan iyo muddo labo sanno ah.
Intii lagu guda jiray asbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay, ciidamada Puntland oo dalbanaya mushahaar ayaa qabsaday xarumo dowladdeed oo uu kamidyahay aqalka baarlamaanka oo kuyaala gudaha caasimada.